ညစ်ပတ်နေတာလား ပိုမိုတက်ကြွသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပြင်ဆင်ပါ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
porn ဖြတ်? ပိုပြီးတက်ကြွစိတ်ခံစားမှု (2013) အတွက်ပြင်ဆင်ပါ
အဘယ်အရာကို Post-porn စိတ်ခံစားမှုပြန်တက်တူသနည်း?
porn အရှုံးမပေးသူကိုယောက်ျားတွေမကြာခဏကဲ့သို့သောမျှော်လင့်မထားတဲ့အပြောင်းအလဲသတင်းပို့ တိုးတက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု, တိုးမြှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်သွားလာခြင်းမှအလိုဆန္ဒ, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု, ပိုပြီးကျေနပ်စရာရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး ဒါဘွား။ သို့သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းမကြာခဏအခြားပြောင်းလဲမှုအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်: သူတို့ကပိုပြီးခံစားရတယ် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း. ဤသည်ကိုမကြာခဏကြိုဆိုနှင့် unnerving နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ယောက်ျားများမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများမှာ -
Guy: "ငါဒီစမ်းသပ်မှုစတင်မှီတိုင်အောင်ဝမ်းနည်းခြင်းကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုပင်စဉ်းစားဘူး။ porn ကိုရပ်တန့်ခြင်းမှပေါ်ထွက်လာသောဤစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ခံစားချက်များသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမို စုစည်း၍ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီခံစားချက်တွေကိုတွေ့ဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ရှင်းပြလို့မရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကနေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းအထိအခုငါတစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုခံစားရတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဤအစွန်းရောက်မှုများကြောင့်ဂွမ်နှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေခဲ့သည်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "လူအများစုအသိအမှတ်ပြုပုံမရသောအရာမှာသင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်မခံစားခဲ့ရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်၊ မင်းအတွက်အရေးမကြီးသောမိန်းကလေးများသည်သင်၏ဘုရင်ဖြစ်သောသင်၏ဘဝအတွက်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ မင်းစမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ဘူးလား။ မင်းဒါကိုမမှုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့အတန်းကိုသင်စိုးရိမ်တယ် သငျသညျနှစ်ပတ်အတွင်းအတွက်လာမယ့်နောက်ဆုံးစိတ်ပူ။ ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ် ငတေကောင်းတယ် ဤအရာသည်သင်ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြီး၊ လူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်ကိုကြီးထွားစေသည်။ ဒါပေမယ့်ထိခိုက်လိမ့်မယ် အချက်များမှာသင်ဝမ်းနည်းရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီထောင်ချောက်ထဲမကျပါနဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ အမှတ်တရတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ သင်၌နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုရှိကြောင်းသတိရပါ။ ခင်ဗျားသက်တောင့်သက်သာမဖြစ်နိူင်သော်လည်းမလွယ်ကူပါ။
“ ကျွန်မမစခင်ကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးချစ်ခင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လအထိ ၃ နှစ်ကြာလျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီအထိကျွန်ုပ်၏အသားကိုညစ်ညမ်းစေခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်ခံစားမှုမှအာရုံမခံစားနိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိသောဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်! ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲအရက် ၂၀ အထိကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီ။ အခုတော့မိန်းကလေးအတော်များများကကျွန်တော့်ကိုချဉ်းကပ်နေကြတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးသောစိုးရိမ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (အစာအိမ်ရှိလိပ်ပြာများ) မခံစားရနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါမချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါငါပြန်နုတ်ဖို့လိုတယ်။ ဘယ်တော့မှတဖန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရလိမ့်မည်နည်း ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါ။ ငါဘာမှမခံစားရတော့ဘူး။
"пор, ၎င်း၏အမာခံမှာအများကြီးအခြားစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်သင်၏နာကျင်မှုကိုထုံထိုင်းစေပြီး၎င်းတွင်ပြtheနာရှိနေသည်။ မင်းကြည့်ရတာမင်းကတခြားစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ခံစားမှုအားလုံးကိုရေတွက်စရာမလိုဘဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု (သို့) ခံစားမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့မရဘူး။ အထီးကျန်ခြင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကြောင့်ဤအရာများသည်ပျော်ရွှင်မှု၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းစသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုလည်းမှေးမှိန်စေသည်။
တိကျစွာဘယ်လိုသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုထုံသနည်း? ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည် homeostasis အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုးဆွမှုတွေနဲ့ထိုးနှက်ခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကညှိပေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်အာရုံကြောဆဲလ် receptor အဆင့်များကိုအဓိက neurotransmitter များအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်ပြချက်များကိုအသံတိတ်စေသည်။ နာတာရှည် overstimulation ထို့ကြောင့်ထုံဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, အ overstimulation ဖယ်ရှားခြင်း (နေ့စဉ်ဘဝ ပို. ပင်မှိုင်းများနှင့်အနတ္တဖြစ်ပုံရသည်ဖြစ်သောကြောင့်) ပထမဦးဆုံးမှာပုပ်ခံစားရပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းထုံသူ့ဟာသူနောက်ကြောင်းပြန်။ အရောင်များကိုပြန်လာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတိုး။
Doug Lisle သည်သူ၏ TEDx ဟောပြောပွဲအတွက်ချက်ကဒီကရှင်းပြသည်: အဆိုပါပျော်ရွှင်မှု Trap။ သူသည် overeaters သည်အစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသီးဖျော်ရည်ကိုသာသောက်သုံးသည့်အချိန်ကာလနှင့်အတူအစားအသောက်တပ်မက်မှုများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းဥပမာပေးသည်။ အလွန်အကံျွတိုးမြှင့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စွာတိုးမြှင့်ခြင်း၏နိယာမသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပါအ ၀ င်သဘာဝဆုကျေးဇူးအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ (ဤတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဟုမကြာခဏခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်)ကို restart။ ")
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်“ သင်၏သတ်မှတ်ချိန်ကိုပြောင်းလဲခြင်း” နောက်ကွယ်ရှိအခြေခံမူများနှင့်နည်းစနစ်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသောအကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Todd Becker ၏ www.gettingstronger.org ဖြစ်သည်။ နားထောင်ပါ Todd နှင့်အတူရေဒီယိုအင်တာဗျူး.
စိတ်ကျဝေဒနာသုတေသနသည်လှုံဆော်အားအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ခံစားမှုများကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ၎င်းသည်နောင်လာမည့်ပို့စ်တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုမည်။ ယခုသုတေသနအနေဖြင့်ဖော်ပြပါမည် dopamine အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုဖြန့်ဖြူး အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ရန်၊ ၎င်းသည်နိမ့်သောအခါ၊ အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုမျှော်လင့်ရသည် ဘာမြှ ခံစားချက်များကို အကြောင်းကိုအနှောက်အယှက်တန်ဖိုးရှိ.
သုတေသီများသည် (desensitization) (ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit ကို numbed activation) အဖြစ်သက်သေပြပြီးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုစွဲ, အစားအသောက်စွဲ နှင့် လောင်းကစားစွဲ။ တကယ်တော့အားလုံးအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအဆိုပါဝေမျှ တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ, desensitization တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်သော၏။
သို့သော် လုံးဝသူတို့အားတွေ့ရှိချက်လျစ်လျူရှု, SPAN Lab ကခေါင်း တစ်ဦး sexologist အားဖြင့်၃ မိနစ်ကြာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှင့်အခြားရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အံ့အားသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး၊ ပြuseနာမရှိတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိသောသူများထက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းစိတ်ခံစားမှုများပိုမိုကျယ်ပြန့်လာကြောင်းသတင်းရရှိသည် သုတေသီများကမူခြားနားချက်ကိုရှင်းပြရန်မရှင်းပြခဲ့ပါ။ ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုကျယ်ပြန့်သော“ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း” ကိုပြသသင့်ကြောင်း (ဒီအယူအဆအတွက်သီအိုရီအရမရှိဘဲ) ပြသသင့်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျော့နည်းသွားမှုသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်စွဲလမ်းသူများမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြသင့်ကြောင်းသူတို့ငြင်းခုံခဲ့သည်။ (ဟမ်?)
အဖြစ်မှန်ထုံဦးနှောက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည် နည်းသော လှုံ့ဆော်မှု-မဟုတ်လျှင်ရန်, သင်တန်း၏တုံ့ပြန်မှုအဲဒီ လှုံ့ဆော်မှုတိကျသောတွေကိုများမှာ ကြည့်ရှုသူ၏အထူးအာရုံ (အဖြစ်အာရုံ neuroscientists အားဖြင့်လူသိများသည်။ ) ာင်း) ။ ဒါ့အပြင်စိတ်ဓါတ်များအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်တိကျစွာတစ်စုံတစ်ဦးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် အခြို့သောအရောင်များကိုရိပ် မိ.၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ dopamine စည်းမျဉ်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
လူသားတစ် ဦး ချင်းစီသည်သဘာဝအားဖြင့်မတူညီသောကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များစွာကိုဖော်ပြကြသည်။ သို့ရာတွင်၊ ထိုစကားလုံး၏ကြီးမားသောအနုပညာမှလူ့အထီးများသည်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သောစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာအထိပြောင်းလဲလာသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားများအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းအမျိုးသားယောက်ျားစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအလေးထားကြောင်းလား။ ဒီနေ့ခေတ်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ခံစားချက်တွေထက်နည်းနည်းပဲပြပေးနိုင်တာကယနေ့ ဦး နှောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းနေတဲ့အွန်လိုင်းsmörgåsbordsကိုတုန့်ပြန်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာ“ ထိန်းချုပ်မှုအောက်” ကျဆင်းသွားလို့လား။ (အမျိုးသမီးများကစတင်နေပြီဖြစ်သည် တူညီသောကိစ္စရပ်များအားသတင်းပို့, စကားမစပ်။)
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ၊ တစ်ယောက်တည်းနေရသော်လည်းအတော်လေးပျော်ရွှင်သော်လည်းမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါ၊ အောင်မြင်မှုလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာအလွန်အမင်းသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလုံးဝအချည်းနှီးပါပဲ။ အဘယ်အရာကိုမျှငါ့ကို phased ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည့်ထိုဝတ္ထုကိုရေးသားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းပြေးချင်သောထိုမာရသွန်ပြေးပွဲအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ဖတ်လိုသည့်စာအုပ်များအကြောင်း၊ လူများတွေ့ဆုံရန်တိုတိုတိုတို့နှင့်ဘဝကိုတွေးမိလာသောအခါ အသက်ရှင်ပါ - ငါ fap လိမ့်မယ်။ “ ငါမနက်ဖြန်စမယ်၊ ယခုငါ fap လိမ့်မယ်။ " သင်တို့ရှိသမျှသည်သွားပုံကိုငါသိ၏။ ၎င်းသည်တိုတောင်းသော၊ ချိုမြ။ လွယ်ကူသောထိုခွက်ကိုသင့်အတွင်း၌ဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ နီးပါးဘာမျှခံစားရတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြို့ကြီးမှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်သည် (အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်အလုပ်မှစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်) ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးလုံးလျားလျားကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်မကြာခဏဆိုသလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်စိမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရာအားလုံး fapping နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငါ့ကိုပျင်း။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကလိင်တစ်ခါတစ်ရံ fapping ထက်ယုတ်ညံ့တယ်။ ”
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: "အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကကျွန်ုပ်အားစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်စွမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆယ်ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအစောပိုင်းထုံးစံအတိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးငိုခဲ့ရသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာငိုခဲ့တယ် - ဂီတကိုနားထောင်ရင်း၊ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖတ်နေစဉ်၊ ငါ့ဘဝရှိလူများကိုစဉ်းစားစဉ်၊ လှပသောအတွေးအခေါ်များပင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုးအရင်တုန်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါမှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံးငါဝမျးနညျးပူဆှေးခဲ့သညျ။ အချို့သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောမီးခိုးမြူများကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကြီးသော်လည်း၊ ငါမသက်မသာထုံခဲ့သည်။ ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တာငါကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပိုပြီးလေးနက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေထဲကတစ်ခုပါ။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ sensitivity သည်မကြာခဏဆိုသလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့သည်။ သင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတာဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အားဖြည့်ပေးတယ်။ ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့လေးလကထက်ပိုပြီးတေးဂီတကိုရေးခဲ့ပြီးပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကထက်ပိုပြီးများတယ်။ ”
ဒုတိယအကောင်လေး"ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကတည်းကငါ့ဘဝမှာတိုးတက်လာတဲ့အရာတွေထဲမှာအခြားသူတွေအပေါ်ငါ့ရဲ့စာနာမှုကိုမမျှော်လင့်ဘဲတိုးများလာစေတယ်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုဂရုစိုက်သော်လည်းအခြားသူများ၏ခံစားချက်ကိုနားလည်ရန်သို့မဟုတ်မျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့၌စာနာမှု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်မှမကောင်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားမကောင်းကြောင်းခံစားမိနိုင်သည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလက်ခံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မခံစားရပါ။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကအခြားလူမျိုးများ၏ရုန်းကန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ သိမ်မွေ့ပြီးအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့၌တစ်ခါမျှမရှိဖူးသောနည်းဖြင့်“ သူတို့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်” ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ တခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဝမ်းနည်းကြေကွဲမိတယ်။ အရင်တုန်းကမရှိခဲ့ဖူးတဲ့နည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ ”
တတိယကောင်လေး: "ငါ porn ကြည့်နေစဉ်, ငါအလွန်ထိရောက်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်၊ မိသားစု၊ ကြွေးမြီ၊ အမျိုးသမီးများ၏ခံစားချက်များ၊ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအလားအလာ (ကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာဖြစ်ပုံရသည် - အဘယ်ကြောင့်မည်သူမဆိုကလေးများရလိမ့်မည်နည်း) အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မပေးခဲ့ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အန္တရာယ်များ၊ မဲပေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်။ ဆိုလိုတာက Reddit ပို့စ်များကိုကြာရှည်စွာရေးသားနိုင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်မှန်လဲ၊ မှားသည်ဆိုတာကိုအဆုံးမဲ့အတွေးအခေါ်ဖြင့်ရေးသားနိုင်ခြင်း။ ဒါပေမယ့်အရေးယူတဲ့အခါငါသေပြီ။ ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သောလူ ဦး ရေအချိုးအစားသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အလွန်ကြီးမားသောဒုက္ခရောက်နေသည်။ ခဲအဆိပ်သင့်မှု၏သိမ်မွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ရောမအင်ပါယာပြိုလဲသွားသည်ဟူသောသမိုင်းဆိုင်ရာဒဏ္myာရီတစ်ခုမှာသူတို့၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ခဲပိုက်နည်းပညာအသစ်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်သည့်အချက်မှာယနေ့ခေတ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အိမ်တိုင်းနှင့်အိပ်ခန်းတိုင်းသို့အင်တာနက်ကို ဦး နှောက်ထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ”
စတုတ္ထကောင်လေး: “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုပြန်ဆင်းခြင်းကစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အားကစားကိုလုပ်ခြင်းထက်ပိုပြီးနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ 'ညှိနှိုင်းမှု' ကိုဖြစ်စေတယ်။ ၎င်းသည်လူသားများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဆင့်၌ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအရာတစ်ခုလုံးအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသိစိတ်တွင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်ဟုကျွန်ုပ်ပင်ပြောနိုင်သေးသည်။ ”
တိုတိုပြောရရင်အကယ်၍ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုအမှတ်မထင်မှတ်မိနေပါက၎င်းသည်ဘုံအသိပညာဖြစ်ရန်မသင့်လျော်ပေလော။ ၎င်းသည်ပိုမိုသိသောရွေးချယ်မှုများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အချိန်မီစမ်းသပ်မှုအချို့ကိုလည်းအားပေးလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်ကပြောနိုင်သည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအရှုံးမပေး ဘဝသည်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာ“ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်” အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကြည့်ရန်လအနည်းငယ်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဘ ၀ ဟာမှေးမှိန်နေပြီ။
porn မိန်းကလေးတွေပဲလိင်ကစားစရာများမှာ, ငါ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟုခေါ်တွင်ဘာမှမရှိဘူး, LUST သည်စကြဝuniversalာဆိုင်ရာအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အားလုံးဆက်ဆံရေးနှင့် Bond မှားယွင်းသောဖြစ်ကြသည်။
လူတိုင်း faps ဒါငါလုပ်ရင်ပြtheနာကဘာလဲ?!
porn လိင်ပညာရေး (ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကလစ်မြင်သောအခါ LOL ဒီအမှန်တကယ်ငါ့ထံသို့အားကြားပြောလေ၏) ဖြစ်ပါသည်။
ဘဝကသာရောင်စုံပေမယ့်သူတွေကိုအရောင်များကိုတစ်ဦး, HD မျက်နှာပြင်ထက်ပိုမိုတောက်ပပါ၏ အားလုံးလမ်းညွန်မယ့်တစ်ဦးခြေလှမ်းကို ယူ. , သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏; fapping သည့်အခါဘဝအမှန်တကယ်လည်းယိုယွင်းခဲ့သည်😛
“ Porn” သည်“ အစစ်အမှန်” ကမ္ဘာကြီးနှင့်မပူးပေါင်းလိုသူများအတွက်ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးများသည်သင်၏ကမ္ဘာကိုတောက်ပစေနိုင်သောလှပသောသတ္တဝါများဖြစ်သည်။
ဆက်ဆံရေးနှင့် Bond အများဆုံးတိရိစ္ဆာန်များကနေလူသားမြားသခွဲထုတ်။
porn တကယ်လိင်ပညာရေးလျှင် LOL နောက်တဖန်, ငါသည်ယခုကဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့ကြသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ရက် ၉၀ အတွင်းမှာအတက်အကျတွေများလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်ဘဝမှာဒီလိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့နေ့တွေရှိလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမတွေးဖူးဘူး။ ”
မိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရပေးထားပိုပြီးကျေနပ်စရာရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်ခဝါသည်ဘဝတွေကိုများအတွက်ထိရသေးသောအလားအလာကြီးမားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဤနောက်ဆုံး Self-အစီရင်ခံစာများမှတဆင့်ဖတ်ပါသကဲ့သို့သင်တို့ထင်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါ:
နောက်ကောင်တစ်ယောက်[နေ့ 36] ငါအသက်အရွယ်၌မခံစားရဘူးစိတ်ခံစားမှုခံစားရတယ်။ ဒါဟာငါ့ဘဝထဲကစိတ်အားထက်သန်မှုများစွာကိုစုပ်ယူသလိုပါပဲ။ ငါထပ်မံခံစားချက်အသစ်များခံစားလာသည်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအများကြီးခက်ခဲတယ် .... လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါဟာပိုပြီးသဘာဝကျတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ငါမှာလည်းစိတ်အပြောင်းအလဲနည်းတယ်။ ငါကမိန်းကလေးတွေကိုအများကြီးပိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ ပြီးတော့လိင်ကိစ္စထက်ပိုပြီးသူတို့နဲ့စကားပြောဖို့လိုတယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ ငါ့ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့အရာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းကဘဝကိုတကယ်မထားနိုင်အောင်တားဆီးပေးတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ကိုလူမှုရေးကိုဖြစ်စေတယ်။ လူမှုရေးအပြုအမူများကိုဆုချသည်။
နောက်ကောင်တစ်ယောက်[ခေတ် 17] ငါအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလာပြီးဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်ခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်နေ့အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုချစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းခံစားချက်တွေနဲ့ခံစားချက်တစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်လွယ်ကူစွာမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးအထွေထွေအမျိုးသမီးများနှင့်စွဲလမ်းနေသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအရင်က SO လိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး။ ”
သင်၏စိတ်သည်တစ်ပတ်မှတစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ရက်သွားလျှင်တောင်မှသင်၏စိတ်အခြေအနေသည်အခြေအနေမှပြည်နယ်သို့ပိုမိုသဘာဝအခြေအနေသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ NF ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုတံခါးဖွင့်လိုက်ရင်၊ မင်းပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေမလိုချင်ဘူး၊ ခင်ဗျားကအသားအရေကိုတကယ်လိုချင်တယ်၊ သင်သည်ချက်ချင်းမိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမလိုချင်ပါ။ သင်၏စွဲနေသည့် ဦး နှောက်က၎င်းကိုလိုချင်သော်လည်းဤတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောလုပ်ရပ်၏အသံအောက်တွင်သင်ပိုမိုလိုချင်နေပြီးသင်ကထိုထက်မကပါ။ LINK
porn ထံမှ unhooked သည့်အခါပိုမိုကောင်းမွန်မျက်လုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်မည်မျှအပေါ်ဂရိတ်ချည်: မျက်စိထဲမှာပါပဲ
ငါငါ့အသစ်က Streak စတင်ကတည်းကငါပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့မျက်လုံးများသူမ၏ဝိညာဉ်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါကဒီမှာမျက်စိနှင့်မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်လျှင်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမက“ မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစွန့်လွှတ်ပါ” လို့ပြောတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ဤမျက်စိအပြန်အလှန်ခံစားခဲ့ရကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာမှော်အချို့ရှိသကဲ့သို့ပါပဲ။ ငါမတိုင်မီဒီတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ရှည်လျားသော Streak အပေါ်သာ။ ဒီဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်ဘ ၀ ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှုပ်နေရတာလဲ။ nofap နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မျက်စိနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်လျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအခုနေထိုင်နေတယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး"သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ fap ဖြစ်သည့်အခါသင်တစ်စုံတစ်ရာကိုတကယ်စာနာမိသည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဤသို့ပြောခွင့်ပြုပါ - ဤအနက်ရောင် / အဖြူရောင်စိတ်ခံစားမှုအစီအစဉ်သာရှိသည်။ သင်သာမန်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းပါသည်။ အနည်းဆုံးဒီငါ့အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ငါယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မှေးမှိန်။ ဒီခံစားချက်တွေအားလုံးငါ့ဘ ၀ ထဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဒါဟာတကယ်ကိုအုတ်တစ်တန်လိုတကယ်ထိမှန်ခဲ့တယ်။ လျင်မြန်သောဥပမာ - တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ထိုလမ်းမအလယ်၌ရပ်ပြီးကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်။ အရူးတစ်ယောက်လိုပြုံးမိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်အခန်းထဲတွင်ထိုင်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကြားသောကြောင့်ခွေးကဲ့သို့ငိုခဲ့ရသည်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါကပိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဖြေ - အရင်တုန်းကငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးတဲ့အခါမှာတော့ငါဟာထုံထိုင်းသွားတယ်။ ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်၌ထက်ပိုမိုစိတ်ခံစားမှုခံစားခဲ့ရဘူး။ ငါအမျက်ဒေါသ, နာကျင်မှု, ချစ်ခြင်း, ကယ်ဆယ်ရေး, ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်။ ငါအများကြီးအော်ဟစ်ငါအများကြီးပြုံးနေသည်။ လူသားတစ် ဦး ခံစားရပုံကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသည်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: “ (နေ့ ၉၀) ကျွန်ုပ်အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ၁၅ နှစ် PMO အလေ့အထရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ခွဲခွာရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှကျွန်ုပ်ဘက်မှမြဲနေသည့် ED၊ ခံစားချက်များနှင့်ဖော်ပြရန်အလွန်အမင်းအခက်အခဲ၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုပြissuesနာများရှိသည်။ တစ်နေ့ ၃၅ လောက်မှာတစ်ညတည်းမှာပဲငါဟာငါ့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသူနဲ့လိင်ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့ ED ပြproblemနာကအများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာငါအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေအားလုံးဟာပိုပြီးအရည်ပျော်လာပြီးလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတာတိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ထိတွေ့ရလွယ်ကူတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပထမ ဦး ဆုံးအရာ၌သူကအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက် [ဆေးလိပ်ဖြတ်] ငါ့ကိုနှစ်ပေါင်းငါဖြစ်ခဲ့ဘူးသောစိတ်ခံစားမှုထုံပြည်နယ်မှငါ့ကိုပြောင်းရွှေ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ၇၅ ရက်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီမှာမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ သူကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမကြာသေးခင်ကမှကွာရှင်းပြတ်စဲသူလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသိပ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုမခံစားခဲ့ရဘူး။ ငါ့အသားအရေပေါ်မှာငါနင့်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့အခြေအနေနဲ့သူမအပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်လို့လည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ကောင်တစ်ယောက်[နေ့ 18] ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်အတွင်းစွမ်းအင်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုအမြဲတမ်းနီးပါးအချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သိသောအမျိုးသားအများစုထက် ပို၍ သူရဲကောင်းဆန်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။ စွမ်းအင်အဆင့်ကကောင်းမွန်တယ်၊ ငါဟာဘဝမှာအရမ်းပြည့်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့လူတစ်ယောက်လိုမျိုးပိုခိုင်မာတယ်။ ငါဟာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမခံရဘူး။ ငါမှီခိုအားထားရလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး"ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းတွင်အခြားfကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်တိုက်ပွဲများ၊ သေခြင်း၊ သေခြင်းစသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ငါတစ်နေ့ကိုဗီဒီယို ၂၀ ကြည့်နေတယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရင်တောင်မှတုန်ခါမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်သွားတဲ့အခါခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုတွေပြန်စတော့သလိုပဲ။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနဲ့ဆက်စပ်နိုင်သလား? "
ဒုတိယအကောင်လေး: "ဟုတ်တယ်၊ မင်းဆိုလိုတာကိုငါသိတယ် ငါခဏတာညစ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်၊ ငါဘာမှသိပ်ပြီးများလွန်းတာ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် porn မပါဘဲအစာအိမ်နာမရှိဘဲ [လိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြည့်သော] porn ကိုငါမကြည့်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တဲ့အခါငါကြည့်နေတုန်းတောင်မှစားလို့မရဘူး။
တတိယကောင်လေး: “ မင်းပြောတာကရယ်စရာကောင်းတယ် ငါ avid ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူတ ဦး ဖြစ်တဲ့အခါငါကဒီအချက်ကိုမစဉ်းစားဘဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး၊
ငါအခုထိ hardmode ၏နေ့ 134 ရက်နေ့တွင်ပေါ့။ ငါအရမ်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခံစားရတယ်။ လောက၏အရောင်များ၊ အသံများ၊ အနံ့များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးသည်အလွန်တောက်ပ။ လှပသည်။ ငါနက်ရှိုင်းသော, တိမ်ထူအိပ်မက်ကနေနိုးထတူသောဒါဟာခံစားရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုဒါလှပသောပါ!
စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လာနေကြပြီ ငါတော်တော်များများပျော့ပျောင်းနေတယ်၊ ​​လျစ်လျူရှုပြီးပျင်းနေတယ်၊ ​​ဘာမှမပျော်ဘူး။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိ မိ၍ မျက်ရည်များကျစေသည့်သမိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်အကြောင်းပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုဖြတ်မိမိခဲ့သည်။ ငါအရင်ကသာမန်သို့မဟုတ်clichéထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်အရာယခုငါ့ကိုနက်ရှိုင်းစွာလှုံ့ဆော်ပေး။ ငါရလဒ်တွေကိုကြည့်တယ်!
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါသတိထားမိသည့်နောက်အချက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်“ လွတ်မြောက်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် (ကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်အားမငယ်သော်လည်း) လည်ချောင်းနှင့်ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းခံစားမှုကိုခံစားနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုတူညီစေသည်။ အတိတ်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော် ၀ မ်းနည်းမိတယ်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမိတယ်၊ ဘာကြောင့်အဲဒါကို“ မခံစားရ” တာလဲဆိုတာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: “ [၆၃ ရက်] ကမကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ခံစားချက်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည့်အတိုင်းဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သေချာသည်။ ငါဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ အခုငါ့ခံစားချက်တွေနဲ့ငါဆက်သွယ်နေပြီ။ ဒီအပြောင်းအလဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကောင်းလာတယ်။ တကယ့်ကိုထပ်အသက်ရှင်ပြန်တာနဲ့တူတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ခံစားမှုကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့အခုငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ငါကလေးတွေပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့တဲ့အခါငါအားလုံးနွေးနေတယ်။ ဒါ့အပြင်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကျွန်မပိုပြီးခံစားရတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: “ [နေ့ ၃၆] ဘဝသို့ပြန်လာစိတ်လှုပ်ရှားမှု။ ဒါကနာကျင်စေပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာအချိုးအစားမကျဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှင်နေတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအောင်မြင်မှုသည်အဆင်မပြေမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ ငါနားလည်ရဲ့အစ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာငါးနာရီ wankfest ဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသေစေခြင်း (သို့မဟုတ်သင်၌သင်၌စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုရှိနေသည်ဟုဘယ်တော့မှမသိပါ) ဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါ့ဘဝအကြောင်းပိုကောင်းလာတယ်။ ယောင်္ကျားကငါဟာငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့တာထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ ချိုသောခံစားချက်ကိုခံစားပါ၊ အခြေအနေကိုခွင့်ပြုပါကပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဖြေလျော့ပေးခြင်း၊ တီထွင်ကြံဆခြင်းဖြင့်ပျော်မွေ့ပါ။ အဲဒီလိုလူတွေတုံ့ပြန်ကြတယ်။ လမ်းပေါ်မှာလျှောက်လျှောက်ရင်းတောင်မှအခုအချိန်မှာပဟေerိဆန်ဆန်စွန့်စားမှုတစ်ခုပါ။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့ဘက်ကိုဖုံးကွယ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများအကြောင်းဖွင့်ဟ။ လူများကို ၀ င်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ပုန်းနေသည့်အရာအားလုံး၌အားနည်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောပြissueနာဖြစ်သည်။ အခုတော့အဲဒါကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြီးပြီ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာတွေ၊ ငါဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့စကားပြောဖို့မလွယ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုသိရှိပြီး၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ သငျသညျကိုပယ်ဖြတ်သောကောင်လေးမှာချွတ် Pissed? အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ သင်၏ဘ ၀ ၌ကောင်းသောအရာများကိုတန်ဖိုးထားပါ။ ငါအဖြစ်ကောင်းစွာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြသအကြောင်းကိုအများကြီးပိုပြီးပွင့်လင်းဖြစ်၏။ တကယ်ပျော်လား ထွက်ခွင့်ပေးပါ မနက်ဖြန်မရှိဘူးလိုရယ်၊ ကျန်တဲ့လူတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါ။ ငါတစ်ခုခုအတွက်တကယ်ပျော်ရွှင်မိပြီးဖုံးကွယ်ထားရသလိုခံစားရတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ပါကအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? မပြောတတ်ဘူး။ အခြားသူများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏အကောင်းဆုံးခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါငြင်းပယ်လေ့ရှိသည့်နေရာယခုငါအလိုရှိသည်။ လူတွေကိုငါမမောင်းတော့ဘူး။ သူတို့ကိုငါပိုပြီးနီးကပ်စေချင်တယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ငါ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဘဝမှာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်မှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုအလွယ်တကူနှိုးဆွပေးနိုင်တယ်။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပိုပြီးထိတွေ့မိတယ်။ ”
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ ရက်တာရက်တွင်ရှိပြီး ၆ ရက်မှစ၍ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ညစဉ်ညတိုင်းအမှန်တကယ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မက်ခဲ့ရသည်။ ၁၀ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအနေဖြင့်တစ်နေ့တာတွင်အိပ်ချင်စိတ်မရှိဘဲနံနက်တိုင်းလန်းဆန်းမှုခံစားလာရသည်။ ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှု၊ anhedonia၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ဒီမတိုင်မီည ၈ နာရီမှ ၉ နာရီကြာညအိပ်ရပ် ၀ င်ပြီးသည့်တိုင်ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းပတ် ၀ န်းကျင်၌ကျပန်းအရာများသာစီးနင်းနိုင်ပြီးဘယ်တော့မှအနားယူမည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အထူးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သနည်း။ PMO စွဲသူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ REM-sleep နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာသောအိပ်မက်များသည်ကျန်းမာသော dopaminergic လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သည်။ ဘုရားရေ! 100% အထောက်အထား NoFap အလုပ်လုပ်! PMO စွဲသူတစ် ဦး သည်မည်သည့် REM အိပ်စက်ခြင်းကိုမှမရရှိနိုင်ပါ။
တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာသောအခါအားကစားရုံမှမြက်ခင်းပြင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲကတစ်ယောက်ယောက်က on on switch ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်မရဲ့သိစိတ်ကိုမြှင့်တင်လိုက်ပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆူညံသံအားလုံးရပ်တန့်သွားတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့နှစ်တွေကြာတဲ့အခါငါကမ္ဘာကြီးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးတကယ့်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းအသရေကိုလည်းကြားနိုင်ခဲ့ပြီ။ အဲဒီမှာရပ်နေပြီးသဘာဝသံတွေကိုနားထောင်ပြီးလက်ချောင်းတွေကြားမှာမြက်ပင်တွေပေါက်လာတယ်။ တချို့လူတွေကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ကြတယ်၊ ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ဒီအခိုက်အတန့်လေးပဲ။
ငါအသစ်သောဝိညာဏ်အဆင့်အထိမြင့်တက်ပြီလော တစ်ခုခုကိုလမ်းငါငါ့ ဦး နှောက်အတိတ်စွဲနှင့်လှညျ့ကနေပြန်လည်ထူထောင်နေသည်ထင်။ ငါတဖြည်းဖြည်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းကိုမြင်မှစတင်။ ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ သည်အင်တာနက်နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စရပ်များတွင်လှည့်စားခံနေရသောဘဝ၌အချိန်များစွာဖြုန်းတီးခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုငါ့ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားအသုံးမကျအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ကြှနျတေျာ့ facebook အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့, ငါ့ disqus အကောင့်ပေါ်မှာရှိသမျှမှတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်, ငါ့ twitter account ကိုဖျက်ပစ်။ အဖြစ်မှန်ယနေ့ 100 တစ်တန်ကုန်တင်ယာဉ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုဝင်တိုက်နဲ့ကျွန်မယခုအမှန်တကယ်ငါဖြစ်ခဲ့သည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပုံကိုငါသိ၏။ အဖြစ်မှန်ထရပ်ကားကဲ့သို့ငါ့ကိုဝင်တိုက်
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "လူတွေကဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းပြောရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါဟာစိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု၊ အထူးသဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာ PMOing ကစနစ်ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်။ မလိုပါဘူး။ ရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်၊ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အချိန်ပါ။ ဒါဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ အခုငါဘဝဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်သတိပြုမိလာတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "[နေ့ ၁၀၄] အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ငါဟာအရင်ကထက်ငါဟာငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပိုပြီးအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပြီးအရာရာကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ”
နောက်ထပ်ကောင်လေး: ဆေးလိပ်ဖြတ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ - သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလှပသောကမ္ဘာကိုရေတွက်မယ့်အစားဒီပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုတစ်ချိန်လုံးခံစားပါ။ လမ်းလျှောက်နေသောလူသေတော့မရှိချေ။ ”
ဂစ်တာတီးမှုတ်သီဆိုနေသောလူတစ်ယောက်ရှိ၏။ ငါရိုင်းစိုင်းဆုံးဖြတ်ရန်ငါသိသော်လည်းသင်ကြားရပေမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမခံနိုင်တော့တာကြာပြီ။ အရက်ဆိုင်ကနေထွက်ခွာပြီးရယ်မောသံနဲ့စတင်အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးရယ်မောစရာကစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အဖော်တွေကကျွန်တော့်ကိုအပြင်မှာရယ်နေတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ရယ်ကြတယ်။ လူတွေကဒီသေးငယ်တဲ့ / တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာခေါင်းတွေလှည့်လာကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုထွက်ခွာခိုင်းတယ်။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကဒီနေ့အထိနှစ်ပေါင်းများစွာအထိစိတ်လှုပ်ရှားမှုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားခဲ့ရတာကိုငါမမှတ်မိဘူး။ စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ငါ့အားဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ရက်ပေါင်း ၂၈၀ - စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအားကျွန်ုပ်ဆွဲဆောင်သည်မှာတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်။ ငါဟာငါ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊
နောက်ထပ်ကောင်လေး: "ရက် ၃၀ အစီရင်ခံစာ - သင်လုပ်လိမ့်မည် ခံစား အရာရာ - ငါ porn ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ငါမကိုင်တွယ်ချင်တဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်သုံးခဲ့တယ်။ အများအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု၊ သင် porn ကိုညီမျှခြင်းထဲကယူပြီးတာနဲ့သင်ပုန်းနေတဲ့အရာတွေကိုခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အမှု၌, ဒါဟာနေဆဲနည်းနည်းနာကျင်နှင့်မသက်မသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ OK ကို IS ။ သင်ကအားကြီးလာလိမ့်မယ်။ ငါတကယ်ပဲ၊ တကယ်ပဲ၊ တကယ်ပဲအားကောင်းတယ်၊ ငါ့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ် (တိုက်ပွဲကအဝေးကြီး) ။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: “ ငါညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတွေဝန်းကျင်မှာနွေးနေတာမျိုးတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ ချစ်စရာမိန်းကလေးကခုန်တာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ၊ ငါထွက်လာပြီးဒီမိန်းကလေးတွေနဲ့တကယ်ထိတွေ့ဖို့ဒီဆာလောင်မှုကိုခံစားရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုထပ်မံခံစားလာရလို့ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ရှင်သန်ရန်နောက်တဖန်ရည်းစားထားရန်မစောင့်နိုင်ပါ။
နောက်ထပ်ကောင်လေး: ငါငါ့အသစ်က Streak စတင်ကတည်းကငါပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့မျက်လုံးများသူမ၏ဝိညာဉ်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ သူမမျက်လုံးများမှတစ်ဆင့်သူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူမသည်ငါ့ကို shit "ဟုပြောသည် သင်၏မျက်စိတို့” ငါ "ဘာလဲ" ဟုပြောသည် သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုထိုးဖောက်နိုင်သလိုပဲ သူမသည်ရုံပြုံးပြသည်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဒီမျက်လုံးအပြန်အလှန်ခံစားရတယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဒါဟာမှော်အချို့ရှိသကဲ့သို့ပါပဲ။ ငါမတိုင်မီဒီတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ရှည်လျားသော Streak အပေါ်သာ။ ဒီဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရင်ဘ ၀ ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှုပ်နေရတာလဲ။ nofap နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မျက်စိနှင့်ပတ်သက်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်လျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအခုအသက်ရှင်နေတယ်။ ငါဖုတ်ကောင်မဖြစ်မှီ။ မျက်စိထဲမှာပါပဲ
နောက်ထပ်ကောင်လေး: ဘယ်လို nofap ငါ့ကိုတစ်ခု extrovert အောင်နေသည်
ကျွန်တော့်သီအိုရီကဒီလိုပဲ။ ငါ nofap ကိုစကတည်းကငါဟာစိတ်ခံစားမှုကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လာတယ်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်သည်မိဘများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောသူငယ်ချင်းများ (သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်သူစိမ်းများ) များနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်ခံစားချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးယခုကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုပြင်းထန်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားအကဲဖြတ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
ဥပမာ - ငါဟာမျက်လုံးချင်းဆိုင်မှုကိုပိုရှည်စေပြီးမိန်းမတွေကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ပြုံးတယ်။ ငါချက်ချင်းမကြည့်မီ "shit သူမကငါ့ကိုသတိထားမိတွေ့မြင်ခဲ့တာလဲ" စဉ်းစား ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏အကြံအစည်များက“ သူမကိုသူမမြင်တွေ့စေချင်တယ်၊ သူမသူမကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်သူမသတိထားမိကြောင်းသိစေချင်တယ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
နောက်ဥပမာတစ်ခုကမြို့တစ်မြို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘားတခုခုမှာဒါမှမဟုတ်မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာလမ်းလျှောက်ရင်းအမျိုးသမီးတွေတွေ့ရင်“ ဟယ်လို” လို့ပြောမယ်၊
ဥပမာနှစ်ခုစလုံးမှာငါ့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြည့်စွက်ပြီးသူတို့ကိုငါပဲထုတ်ပြောရတော့မှာပါ။ ငါအတည်ပြုချက်ကိုမရှာကြဘူးသို့မဟုတ်ငါသူတို့ကိုကောက်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားရတယ်၊ ခံစားချက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားမိလို့ပါ။
TL; ဒေါက်တာ extrovert = nofap ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏ငါ၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြမှမောင်း + စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်တိုးမြှင့်